घाँटीको दुखाई र टन्सिल भएर हैरान हुनुहुन्छ ? कतै क्यान्सर त भएको छैन ? कसरी थाहा पाउने ? समाधान के ? – Gazabkonews
काठमाडौं । तपाई हामी धेरैमा टनसिल साझा समस्या जस्तै बनेको छ । जिब्रोको भित्री भाग तथा गलाको माथिल्लो सतहमा दुई गाँठा हुन्छन्, जसलाई बोलीचालीको भाषामा टनसिल भनिन्छ । यो संवेदनशील अंग प्रायः चिसोले सुन्निने गर्छ । तसर्थ, टनसिलको समस्या प्रायः चिसो मौसममा देखिने गर्छ ।
टनसिल सुन्निएको अवस्थामा खानपिनमा समस्या हुने मात्र होइन, दुखाईले थुक निल्न पनि कठिन हुने गर्छ । जसले गर्दा हामीलाई स्वास्थ्यमा समस्या हुने गर्दछ ।
टनसिल भएमा घाँटीमा खसखस हुने, खाना, र्याल, रस, थुकसमेत निल्न गाह्रो हुने र बोल्दा कठिनाइ अनुभव हुने गर्दछ । यस्तो लक्षण देखिएमा यसप्रति सावधानी अपनाउने तथा उपचार गर्नुपर्दछ ।
टनसिलबाट जोगिन उष्ट्रासन, ताडासन, पश्चिमोत्तासन, जालन्धरबन्ध उज्जासी प्राणायाम आदि योग गर्न सकिन्छ । यस्तो योगले पनि टनसिलको समाधान गर्न सहयोग पुरुयाउँदछ । टनसिलको जडीबुटीबाट पनि उपचार गर्न सकिन्छ । मन तातो पानीमा फिटकिरी मिसाएर उठ्नेबित्तिकै र सुत्नेवेलामा कुल्ला गर्नाले टनसिल निको हुने गर्दछ । तुलसी तथा खयरको बोक्रा लशून, असुरो, भृंगराजको चिया नुनसँग दिनको ३–४ पटक पिउने गर्नुपर्दछ । त्यसले पनि टनसिल समाधानमा सहयोग पुर्याउँछ । खयरको बोक्रा चुस्नेले पनि टनसिल भएकालाई राहत पुग्ने गर्दछ ।
टनसिलको समाधानका लागि प्राकृतिक उपचार पनि गर्ने गरिन्छ । कुलकुल तथा कुञ्जल क्रिया गर्ने, एनिमा तथा बाफ लिने, घाँटीमा तातो पट्टि लिने गर्नाले पनि टनसिल समाधान गर्न मद्दत पुग्दछ । यदि तपाईमा टनसिलको समस्या छ भने जीवनशैली परिवर्तन गर्नु आवश्यक पर्दछ । जस्तै, चुरोट, तमाखु, गाँजाजस्ता धूमजन्य पदार्थको सेवन छोड्ने, बासी, दूषित, बेमेल र अप्राकृतिक, चिसो भोजन नखाने गर्नुपर्दछ ।